Tojoniaina Rajaonarison na i Tita source photo tananalife.com
Isan’ireo mpilalao efa nantsoina i Tojoniaina Rajaonarison na i Tita, izay irakirak’ity ekipan’ny seranam-piaramanidina ity.
Ankoatra azy ihany koa dia hijery akaiky ny lalaon’i Sarivo Karl na i Godfreeze, mpiandry tsatokazon’ny Adema, ihany koa izy. « azo heverina hanafapo ny zava-bita’ireo mpilalao sahy niady mafy tany an-tanin’olona ireo. Htreto aloha dia mbola tsy voafatra tsara ny anran’ire mpilalao 18 hiady amin’ny Syli National gineanina. Miankina amin’ny fahaizana asehon’ireo mpilalao tsirairay amin’izao izany », hoy i Mosa.
« tanjoany ny hanome sary tsara ny mpilalao malagasy mandritra io lalao io », hoy i Pascal Razakanantenaina na i Bapasy, mpialalaon’ny AC Avion any Frantsa, napetraka ho kapitenin’ny Barea zokony. Miankina amin’ny fisainan’ny rehetra mahatsiaro ho tompon’andraikitra anefa izany. Ho an’ny mpilalao dia tokony hanao tsara ny asany izy ireo. Toy izany ihany koa ny mpanazatra sy ny federasiona ary ireo rafitra rehetra misahana azy. Eo ihany koa ny mpijery izay efa manomboka mamerina ny hasin’ny baolina kitra amin’izao fatoana izao.
Isan’ireo mbola mitatao amin’ny Mahamasina ny sazy mihantona taoria’ny toraka tavoahangy tamin’ny lalaontsika sy Etiopia. « iangaviana an-tanan-droa isika rehetra mba hampiseho firaisankiana amin’io lalao io, satria ny mitabe tsy lanin’ny mamba », araka ny nanambaran’i Bapasy ihany.